कुराकानी – Sagarmatha Online News Portal
महरा र बाँस्कोटा प्रकरणका समाचार ब्रेक गर्ने पत्रकारलाई ८ प्रश्न
दुई हाई प्रोफाइलका गलत काम बाहिर ल्याएपछिको अनुभव कस्तो रह्यो ? दुवै राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्ति थिए । महरा प्रकरण मेरो जीवनकै पहिलो चुनौतीपूर्ण काम भयो । त्यसमा त आकाशबाट हाम फाल्दा प्यारासुट खुल्छरखुल्दैन, नखुलेमा डुबिन्छ भनेजस्तो डर र शंका थियो । अप्ठेरा स्थिति आए कानुनी बचाउ गर्न सकिने प्रमाण पाएपछि बाहिर ल्यायौँ । बाँस्कोटा प्रकरणमा चाहिँ धम्कीको तह बढ्यो । सायद प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्य...
‘गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधीलाई भ्रष्टाचारको आरोप किन आयो ? जनता र पार्टीसँग प्रष्टरुपमा राख्नुपर्छ’ : अध्यक्ष राई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता भएको लामो समयपछि मात्र बल्ल स्थानीय तहमा पनि एक भएको छ । कम्युनिष्टको आधार ईलाकाको नामले समेत परिचित सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको कमिटिका अध्यक्ष सहित सदस्यहरुले भर्खरै सफत ग्रहण गरी पदभार सम्हालेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि पूर्व एमालेको गढ मानिएको गाउँपालिकामा पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी चाँहि पूर्व माओवादी केन्द्रले पायो । पूर्व माओ...
१६ वर्षअघि हराएको हेलिकोप्टर भेटिएको दावी ! के भन्छन त हेलिकोप्टरका मालिक आङछिरिङ शेर्पा ? (भिडियोसहित)
वि.सं. २०५९ जेठ १७ गते मकालु आधारशिविरबाट ६ जना भरिया लिएर लुक्ला फर्कंदै गरेको चार्ली युनिफर्म हेलिकप्टर बिहान १० बजेतिर अचानक बेपत्ता भयो । सुरक्षा टोलीले मकालु क्षेत्रका हिमाली खोचहरूमा खोज्नुसम्म खोज्यो । न हेलिकप्टर भेटियो न त त्यसमा सवार यात्रु । ३ महिनासम्म केही पत्तो नलागेपछि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निचोडनिकाल्यो । खोजी बन्द भयो । रेस्क्यु फ्लाइटको उक्त हेलिक...
स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई पार्टीले गाईड गर्छ : अध्यक्ष वास्तोला
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी एकता भएको लामो समयपछि बल्ल जिल्ला र स्थानीय कमिटि आधिकारिक रुपमा गठन भएको छ । पार्टी एकता भएको एक वर्षभन्दा बढि नेकपाका जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरु अन्यौलताकाबीच नेकपाको प्रतिनिधी भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । आम नागरिकबीचमा अन्यौलता, निराशा र विपक्षी पार्टीको चट्नी भएर एक वर्षभन्दा बढि पार्टीका कार्यकर्ताले समय बिताए । नेकपा सोलुखुम्बु जिल्ला ...
नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सगरमाथा चढेको हुँ : कामीरिता शेर्पा [भिडियो सहित]
२३ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर शिखरबाट आधारशिविरमा झरे लगत्तै कामीरिता पुनः सगरमाथा चढ्ने तयारीमा छन् । यसैवर्ष २४ पटकको आरोहण र्पुयाएर अर्को साल २५ पटक र्पुयाउने अनि आरोहणको कामबाट सन्यास लिने उनको सोच छ । कामीरितको भावी योजना जान्न आधारशिविरमा उनीसँग गरेको छोटो कुराकानीको अंश । २३ औँ पटक आरोहण गरेर आफ्नै किर्तिमानी तोड्नु भएको छ, कस्तो महशुस हुँदै छ ? मलाई त खुशी लागिराखेको छ । म रेकर्ड राख्नक...
‘सोलुका जनप्रतिनिधीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्,’ नेकपा सचिव शेर्पा [भिडियोसहित]
नेकपाले गठबन्धन गरेको लामो समयपछि पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याएको छ । एकता प्रक्रियासँगै सोलुखुम्बु नेकपाले पनि नेतृत्व पाएको छ । गठबन्धन गरेको करिब १७ महिनापछि नेकपाले एकता प्रक्रिया टुंग्याएको हो । पार्टी एकतापछि अब नेकपा सोलुखुम्बुको भूमिका कस्तो रहन्छ ? दुई फरक धारका पार्टीलाई एउटै मार्गमा दिशानिर्देश गर्न कत्तिको चुनौती छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधी र पार्टीबीचको सम्बन्धका बारेका हामीले नव गठित ने...